आज मंगलबार पनि ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य ! हे’र्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो…… – SUDUR MEDIA
May 11, 2021 AdminLeaveaComment on आज मंगलबार पनि ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य ! हे’र्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो……
काठमाडौ । आज नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मुल्य बढेको छ । सोमबार ९२ हजारमा कारोबार भएकोमा छापावाल सुनको मुल्य आज तोलामा तीन सयले बढेर ९२ हजार ३ सयमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएइको छ । त्यस्तै गरी आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९१ हजार ८ सय रुपैयाँ रहेको महासंघले जनाएको छ । तर चाँदीको मूल्यमा भने गत सोमबारको तुलनामा सामान्य गिरावट आएको महासंघले जनाएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः सन् २०२५ सम्ममा सुनको भाउ १० गुणा बढ्न सक्छ ! अमेरिकाको लेबर डिपार्टमेन्टले शुक्रबार बेरोजगारीको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । मार्चको तुलनामा एकातर्फ रेष्टुरेन्ट र पसलहरुमा काम गर्ने कर्मचारीको अभाव रहेको छ । अर्काेतर्फ ९८ लाख मानिस अहिले पनि बेरोजगार छन् । अमेरिकी एजेन्सी सिआईएमा पहिले वित्तिय जासूसका रुपमा प्रख्यात अर्थशास्त्री र बेस्ट सेलर किताब ‘द न्यू ग्रेट डिप्रेशन’का लेखक जिम रिकर्डस् यस परिस्थितीले विश्वको अर्थव्यवस्थाको असल चित्रण गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार विश्व गम्भिर मन्दीमा रहेको छ र सर्वसाधारणहरुले आर्थिक अभावसँग बच्नकालागि सुन, पैसा र बण्डको सहयोग लिनुपर्नेछ ।
आर्थिक डिप्रेसनको भविष्यवाणी किन ? इतिहास अनुसार विश्व महामारीको आर्थिक असर तीन दशकसम्म रहनेछ । हाल मानिसहरु पैसा खर्च गर्नबाट बचिरहेका छन् र त्यसैले हाल अमेरिकामा बचत दर १५ प्रतिशत रहेको छ । विगत १० वर्षको औसत बचत दर ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म रहेको छ । विश्वभरका सरकार गम्भिर कर्जामा डुबिरहेको छ ।
अमेरिकी सरकारको कर्जा जीडिपीको तुलनामा १३० प्रतिशतमा आएको छ । भारत लगायत कैयौँ ठुला देशहरुको तथ्यांक ९० प्रतिशत छ जबकि यसको सीमा ६० प्रतिशत रहेको छ । विश्वमा ८० प्रतिशत अन्तरराष्ट्रिय व्यापार डलरमा हुने गर्दछ । डलर रिजर्व मुद्रा भएका देशहरुमा यो कठिन हुनेछ । डलरको मूल्य घटेमा यी देशहरुमा आयात महंगो हुनेछ । जसको अर्थ मन्दी हो ।
कुन देशले यस मन्दीलाई सजिलै पार गर्न सक्छन् ? वृद्ध भइरहेको जनसंख्याका कारण ल्याटिन अमेरिका, यूरोप, जापान र चीनकालागि परिस्थिती कठिन हुनेछ । भारतले विश्वको मन्दिबाट निस्कनकालागि सहयाेग गर्नेछ किनकी बढिरहेको जनसंख्याका कारण आर्थिक विकास अन्य देशको तुलनामा त्यहाँ तिव्र गतिमा हुनेछ । अर्कातर्फ भारतमा मानिसहरु सुनका पारखी छन् जुन मन्दीमा उपयोगी प्रमाणित हुनेछ ।
सुनमा त्यस्तो के छ ? डलरको मूल्य घट्दा सुनको मूल्य बढ्ने गर्दछ । सन् १९७१ मा सुन करेन्सीबाट मुक्त भएको थियो र सन् १९८० सम्ममा सुनको मूल्य २००० प्रतिशत बढेको थियो । यो सुनको पहिलो बुल मार्केट थियो । सन् १९९९ देखि २०११ सम्मको दोश्रो बुल मार्केटमा सुनको भाउ ६७० प्रतिशतले बढेको थियो । यी दुबैपटक सुनको मूल्य १५ गुणाले बढेको हो । तेश्रो बुल मार्केट सन् २०१५मा सुरु भएको थियो । यसरी सन् २०२५ सम्ममा सुन १० गुणा बढ्नेछ।
यो मन्दीको अनुभव कहिलेदेखि सुरु गर्न सकिनेछ ? जब शेयर बजारमा गिरावट देखिन लाग्नेछ र सुनको भाउ बढ्न थाल्नेछ, तब मन्दीको अनुभव गर्न सकिनेछ । हरेक दिन सामानहरु महंगो हुने क्रम लकडाउन पछि देखिनेछ । जब डिमान्ड अनुसार सप्लाई हुनेछैन । सन् २०२२ आउने समयसम्म यस्तोे अवस्था आइसक्नेछ ।
अन्य कुनै मापदण्ड जसको कारण सुनको मूल्य बढ्न सक्छ ? विश्वभरमा कुल ३४ हजार मेट्रिक टनको आसपासमा सुन रहेको छ । यदि विश्वमा ७५ प्रतिशत जीडिपी भएका देशहरुको कुल मुद्रालाई जोडेमा र ३४ हजार मेट्रिक टनले भाग गरेमा सजिलैसँग एक तोला सुनको भाउ करिब १७७० डलर प्रति अउन्सबाट बढेर १५,००० देखि २०,००० डलर पुग्न सक्नेछ ।
अप्ठ्यारोको समयमा अमेरिकासँग सिमित उपाय मात्र रहेको छ । कि अमेरिका आर्थिक रुपमा टांट पल्टिएको घोषणा हुनुपर्नेछ र यो हुनेछैन । यस्तो अवस्थामा उसले धेरै व्याजदरमा ऋण लिनेछ जसको अर्थ डलरको भाउ घट्नेछ । अत : सुन अमेरिकी डलर तथा यूरो भन्दा महंगो हुनेछ । सन् २०२५ सम्ममा डलरको मूल्य १० देखि १५ गुणा घट्नेछ भने सुन सोहि अनुपातमा बढ्नेछ ।
के हरेक व्यक्तिले सुन खरिद गर्नुपर्छ ? सो अवस्थामा हरेक व्यक्तिले सुन खरिद गरेर आफूसँग राख्नुपर्नेछ । यदि सरकार कमजोर प्रमाणित भएमा उसले जनताको सुन लिन सक्नेछ । यदि जनतालाई आफ्नो सरकारमाथि विश्वास नभएमा सुन लकरमा नराखेर आफूसँग राख्नुपर्नेछ । यस्तो गरेमा आफूलाई आवश्यक परेको समयमा यसको प्रयोग गर्न पाइनेछ । तर यदि सरकार समझदार भएमा उसले जनतालाई सुन राख्न दिनेछ र आफूले पनि यसको भण्डारण गर्नेछ । तर सरकारले जनतासँग सुन खोस्ने गल्ति गर्ने छैन किनकी यस्तो सरकार ढल्न सक्दछ ।
बिटक्वाईन के हो ? ब्लकचेन र क्रिप्टोकरेन्सीकाे चलन बढ्न सक्दछ । केन्द्रिय बैंकले डिजिटल करेन्सीको नाममा क्रिप्टोकरेन्सी लन्च गर्ने सम्भावना रहेको छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायिक बैंकमाथि खतरा आउन सक्छ किनकी उसको अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह लाग्नेछ । बिटक्वाईन एक जुवा हो र योभन्दा धेरै केहि पनि होईन । केहि जुवा लामो समयसम्म चल्न सक्दछ । कुनै पनि मुद्रालाई मुद्रा बण्ड बनाईदिन्छ । बिटक्वाईनको बण्ड बजार बन्दछ र यो असम्भव छ ।
के अमेरिकामा बेरोजगारी सजिलैसँग कम हुनेछ ? कोरोना समयमा सात करोड रोजगारी अमेरिकामा मात्र गएको छ । तर १० प्रतिशत मानिसहरु रोजगारीमा फर्केका छैनन् । त्यहाँ सरकारले मानिसहरुलाई ५० हजार डलरसम्मको सहयोग गरेको छ जबकि उनीहरुको औसत आय २८ हजार डलर थियो । अतः कैयन् मानिस रोजगारी खोजिरहेका छैनन् । यिनलाई पनि जोडेमा अमेरिकामा बेरोजगारी ११ प्रतिशत भन्दा माथि हुनेछ जुन् ६.१ प्रतिशत बताइएको छ ।एजेन्सीकाे सहयाेगमा
श्रीमानले श्रीमतीलाई भूलेर पनि नभन्नुहोस् यी ५ कुरा, नत्र बिग्रिनसक्छ सम्बन्ध….
सुनचाँदीको मूल्य फेरी ह्वात्तै घट्यो, यस्तो छ आजको भाउ….. (1,811)